स्टेशन "स्लाव भाषाहरु Boulevard" - मास्को मा आधुनिक परिवहन मोडतर्फ
स्टेशन "स्लाव भाषाहरु Boulevard" - Muscovites आफू र रूसी राजधानी को पाहुनाहरूसँग विशेष लोकप्रिय छ कि एक ठाउँमा छ। के यति असामान्य छ? यो दैनिक आगंतुकों एक ठूलो रकम किन लाग्छ?
खैर, को पाठ्यक्रम, सबै को पहिलो, यो स्टेशन जो कर्मचारीहरु को संख्या निरन्तर आफ्नो व्यवसाय को लागि प्रयास गरिएको छ भन्ने हो शहर मास्को, मा बनाइएको थियो किनभने, बस नगण्य हुन सक्दैन छ। पर्यटकहरु पनि एक संग्रहालय को सतह मा आकर्षित छन्, उदाहरणका लागि यहूदी सम्पदा र आहुति र दोस्रो विश्व युद्ध, रूस को हीरा फंड र चिरपरिचित विजय पार्क।
खण्ड 1 "स्लाव भाषाहरु Boulevard" मेट्रो स्टेशन। सामान्य विवरण
स्टेशन "स्लाव भाषाहरु Boulevard" को मास्को मेट्रो को Arbat-Pokrovskaya लाइन मा स्थित छ। यो vaulted स्टेशन प्रबलित ठोस प्रबलित।
मंच लम्बाइ 162 मिटर छ। यसबाहेक, यो arches स्टेशन को उचाइ चौडाइ मा 8.5 मीटर यो 10 मिटरसम्मको मात्रा रूपमा पुग्छ कि ज्ञात छ।
त्यहाँ2भूमिगत लबी, सुसज्जित दुई लिफ्ट हुनुहुन्छ भनेर याद गर्नुहोस्। रिबन एस्केलेटर संग - पूर्व लबी एक मंच संग एक सीढी को, र पश्चिमी संग संचार। सतहमा, तपाईं को प्राप्त गर्न सक्छौं भूमिगत पदहरू। आदानों प्रकाश प्रसारण सामाग्री बनेको र "Snegosbros" को एक प्रणाली संग सुसज्जित छन्। पश्चिम लबी बाटो। Kutuzov र Starorublevskoe राजमार्ग मा यात्रु प्रर्दशन गर्दछ। पूर्व - Kutuzovsky संभावना, साथै सडक मा स्लाव भाषाहरु Boulevard मा .. Tarutinsky र जी Kurin।
खण्ड2"स्लाव भाषाहरु Boulevard" मेट्रो स्टेशन। कथा
छैन एक, तर दुई स्टेशन - मूल परियोजना अनुसार बाहिर गर्न निर्माण खण्ड, "Kuntsevskaya विजय पार्क" मा थियो।
दोस्रो स्टेशन "मिन्स्क" हुनुपर्ने थियो। फलस्वरूप, निर्माण स्टेशन "स्लाव भाषाहरु Boulevard" बाट शुरू भएको छ। 2005 मा, परियोजना संशोधन गर्न, अन्त भएको मास्को मेट्रो केवल एक स्टप बायाँ, को वास् Kutuzovsky Prospekt उत्तरी भाग नजिक आदानों सार्न चाहन्थे साथै निर्णय गरे।
यो redevelopment मार्फत एकदम पैसा बचत र धेरै 900 रूपमा मीटर द्वारा क्षेत्र को लम्बाइ कम छ। स्टेशन को अगाडी निर्माण बारे 2006 सम्म सौतेली थियो। 2008 मा हामी स्टेशन "विजय पार्क - Kuntsevskaya" खोलियो गर्दा स्टेशन "स्लाव भाषाहरु Boulevard" निर्माण गर्न जारी भएको छ, र रेल रोक बिना स्टेशन मार्फत बित्यो। र ढाल ढाकिएको निर्माण को prying आँखाबाट, तिनीहरूले मात्र अगस्ट र सेप्टेम्बर7स्टेशन आधिकारिक खोलिएको थियो मा हटाइयो। त्यो द्वारा नजिक छ जो स्लाव भाषाहरु Boulevard, पछि नाम थियो।
खण्ड3"स्लाव भाषाहरु Boulevard" मेट्रो स्टेशन। विशेषता सुविधाहरू
केही मानिसहरू सुरुमा यो कालो प्राकृतिक पत्थर संग सजाया हुनेछ भनेर थाह छ। अब, भ्रमण गर्ने सबै द्वारा उल्लेख रूपमा, स्टेशन भित्री शैली कला नोव्यू रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ, र यो डिजाइन गर्न धेरै समान छ पेरिस मेट्रो। तसर्थ, ट्रयाक पर्खालहरु हरियो संगमरमर को छन् र थप स्टेनलेस स्टील संग सजाया। पावलले कालो संगमरमर मा सेट। ढुङ्गा मंच को किनाराको साथ termoupornym कोटिंग उपचार भएको थियो।
छत अब तिनीहरूलाई मा ठूलो indentations गरिएको थियो जाली गहने, शाखा र पात को रूप मा डिजाइन फैलियो। प्लेटफर्म पर्खालहरु मा दीपक तिनीहरूले उल्लेखनीय छन् कि सारा स्टेशन प्रकाश जस्तै कोणात्मक छन्। Coffered भल्ट अतिरिक्त स्थान को एक छाप सिर्जना गर्ने, छत गर्न दूरी enlarges।
साथै, मंच त्यहाँ रोशनी, र एक डुङ्गामा तीन बेन्चहरूले छन् जो माथि, सुरुचिपूर्ण धातु रूखहरू संग सजाया छ। यस्तै विवरण स्टेशन वर्तमान Boulevard एक महान समानता दिन।
साँच्चै रूसी प्रविधि केन्द्र मास्को छ। एम "स्लाव भाषाहरु Boulevard", प्रसंगवश पनि कमसल छैन, यो अनुसार आधुनिक यात्रु को आवश्यकताहरु संग डिजाइन भएको थियो छ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ आज stably मोबाइल संचार, यो सम्भव अनलाइन प्राप्त छ।
नियम, 5:40 मा खुला लबी, र तिनीहरूले रात अबेर सम्म काम - 1:00 सम्म।
सानो धरती। नोवोरोसीस्क र यसको इतिहास
सांस्कृतिक-ऐतिहासिक रिजर्व पार्क Peterhof: मुख्य आकर्षण र मूल्यहरू को विवरण
भूटान - राज्य। भूटान मा पर्यटन। मुद्रा भूटान
मास्को मा जापानी गार्डन लायक एक यात्रा!
Melchior: घर मा सफाई।
कसरी औंलाहरु र औंलाहरूको बिना सीटी गर्न सिक्न?
Vendace (माछा): व्यञ्जनहरु
ब्राउजर मा मीठा पृष्ठ हटाउन कसरी विवरण
पाइन शंकु देखि जाम कसरी बनाउने
सेकेन्ड "भेगास", मास्को। कसरी सपिङ्ग सेन्टर प्राप्त गर्न "भेगास"
आफ्नो खुट्टा मा नङ च्याउ लागि लोक उपचार: प्रभावकारी व्यञ्जनहरु
हामी सपना व्याख्या पुस्तक हेर्न। खरायो, यो के मतलब थियो?
मृगौला पत्थर लागि आहार